Hordhac: Real Madrid vs Eibar - Los Blancos Oo Kaalinta 2aad Kala Baxaysa Barca, Atletico Oo Ay Saddex Dhibcood U Jirsanayso & Shaxda Zidane Ee Kulanka Eibar - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaHordhac: Real Madrid vs Eibar – Los Blancos Oo Kaalinta 2aad Kala Baxaysa Barca, Atletico Oo Ay Saddex Dhibcood U Jirsanayso & Shaxda Zidane Ee Kulanka Eibar
Hordhac: Real Madrid vs Eibar – Los Blancos Oo Kaalinta 2aad Kala Baxaysa Barca, Atletico Oo Ay Saddex Dhibcood U Jirsanayso & Shaxda Zidane Ee Kulanka Eibar
April 3, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 1
Real Madrid ayaa guul ay keento maanta waxay dib ugu laaban doontaa kaalinta labaad ee miiska kala-sarraynta horyaalka waddanka Spain ee LaLiga iyagoo saddex dhibcood oo kaliya u jirsan doona Atletico Madrid oo hoggaanka haysa, isla markaana waxay hal dhibic dhaafi doontaa Barcelona oo labaad fadhida.
Los Blancos oo ku jirta kaalinta saddexaad ayaa fasaxii kulamada caalamiga ah gashay iyadoo 3-1 kusii garaacday Celta Vigo, halka Eibar oo ku jirta kaalinta 18aad ay barbarro 1-1 ah ciyaartii ugu dambaysay ku kala baxeen Athletic Bilbao.
Tababare Zinedine Zidane ayay kooxdiisu dhibaatooyin badan ku jirtay xilli ciyaareedkan socda ee 2020-21, waxaanay meel hore kaga hadheen Copa del Rey iyo Spanish Super Cup oo ay calfan waayeen, laakiin qaybtii dambe ee xilli ciyaareedka ayay dib usoo noolaadeen oo ay horyaalka LaLiga tartankiisa ku biireen, halka Champions League ay wareegga siddeedda taagan yihiin.
Toddobaadkan iyo midka xiga ayaa u ah mid xaasaasiga ah oo xilli ciyaareedkoodu sida uu noqonayo si dhab ah loo go’aaminayo, waxaanay kala baxayaan Liverpool oo midkood u gudbi doono semi-finalka, halka LaLiga ay Barcelona ku waajahayaan, haddii laga badiyana ay rajadoodu xumaan karto.
Shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka, dhamaantood wax guul-darro ah may arag Real Madrid, waxaanay ugu qaybsameen saddex guulood iyo laba barbarro ah.
Dhinaca kale, Eibar ayaa xilli ciyaareedkani ku xun yahay, waxaanay hore ugu jireen kaalinta 19aad balse hal tallaabo ayay sare usoo qaadeen iyagoo yimid 18aad.
Ciyaarta: Real Madrid vs Eibar
Eden Hazard iyo Dani Carvajal ayaa u dhow in ay soo kabtaan, laakiin labaduba qayb kama aha ciyaarta maanta, lagumana soo darin liiska ciyaartoyda kooxda ee uu shalay shaaciyey Zidane.
Federico Valverde iyo Toni Kroos ayaa tababarkii Arbacadii si fiican u qaatahy, balse Kroos oo kaliya ayaa lagu daray ciyaartan, halka Valverde uu ciyaarta Liverpool ee dhamaadka usbuuca uu taam u noqonayo.
Waxa kale oo Real Madrid ay dib u heshay Alvaro Odriozola iyo Mariano Dias, halka Isco ay u badan tahay inuu kusoo bilowdo khadka dhexe oo uu Kroos kaydka ku jiro ciyaartan.
Real Madrid ayuu ka dhaawacan yahay Sergio Ramos waxaana mar kale iskusoo ag-bilaaban doona Nacho & Varane iyadoo Militao na uu doorasho u noqonayo Zidane.
Shaxaha macquulka ah ee labad akooxood
Ali Maane says:
Waxaa badineeysa Liverpool Arsenal 1-2 liverpool